eBike News: eCargo Halkii Gawaarida, eBikepacking Scotland, Charging Stations, Retro eCruiser, & More!
Toddobaadka eBike ee wareegga wararka:
Ik eCargo Baaskiil Halkii Baabuur loogu talagalay NYC
Iti Citiraafka Citiraafiga ah ee 'Lyft's Citi' wuxuu ku soo laabtay NYC?
Shel Gawaarida Dhirta ee loo Adeegsaday
C eCargo oo laga helo Repower & Schaeffler
Revolution Suuragalnimada Kacaanka eCargo ee Yurub
B eBike Charging Stations oo ku yaal Swiss Alps
Iyo Waxbadan Oo Badan!
eCargo Baaskiil Halkii Gawaarida loogu talagalay NYC
Akhbaar wanaagsan oo ku saabsan goobta elektaroonigga ah ee magaalada New York waxay ku soo baxdaa maqaalkan New York Times. Waxay tafaasiil ka bixinaysaa 'barnaamij cusub oo magaalada ah oo ujeedadiisu tahay inuu ku beddelo qaar ka mid ah kuwan (gaas dhaqameed gaaska) gawaarida keenida oo leh qaab gaadiid oo deegaanka u roon oo aan u hoggaansanayn booska waddooyinka: Baaskiiladaha xamuulka korantada.
Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee magaalada… .has ay si gaar ah u dardar geliso baaskiillada xamuulka sida beddelka baabuurta xamuulka qaada. Ilaa iyo 100 baaskiil xamuul ah oo ay maamusho shirkadda Amazon, UPS iyo DHL ayaa loo oggolaan doonaa inay dhigtaan boqolaal goobo ganacsi oo hadda jira oo u gaar ah baabuurta waaweyn iyo waaskooyinka. Gawaaridaas si ka duwan kuwa kale, baaskiilada ma bixin doonaan mitir. '
Maqaalka ayaa intaa ku daray 'Baaskiilado xamuul oo yaryar ayaa sidoo kale loo oggolaan doonaa inay dhigtaan dariiqyada ballaaran, iyo dhammaan baaskiillada waxay ku safri karaan shabakadaha sii kordhaya ee magaalada oo in kabadan 1,400 mayl oo ah wadiiqooyinka baaskiilka. Baaskiillada waxaa lagu soo uruurin doonaa qeybaha ugu mashquulka badan Manhattan, min 60th Street koonfurta ilaa Battery. '
Magaalada New York, Amazon waxay gaysay baaskiil ay kujiraan alaabada alaabada lagu keenayo Cunnada oo dhan ee Manhattan iyo qaybo ka mid ah Williamsburg ee Brooklyn.
UPS iyo DHL waxay ka shaqeyn doonaan baaskiil xamuul ah magaalada markii ugu horeysay.
Miyaa baaskiillada Citiraafka loo yaqaan 'Lyft's Citi Bikes' inay ku dhow yihiin ku-laabashada New York?
Warshadaha Baaskiilka iyo Ganacsadayaasha ayaa soo weriyey in '' Lyft wuxuu ku dhow yahay inuu dib ugu soo celiyo elektaroonigga ah nidaamkiisa baaskiil wadista ee New York oo leh baytarno hagaagsan iyo birkiyo ', iyada oo tixraacaysa mareegtadan Citi Bike blog.
Dib-u-celinta Citi Bike ayaa dib u dhacday bishii Abriil ka dib markii qaar ka mid ah rakaabku ay soo wariyeen shilal xoog-muquunis xad dhaaf ah oo xagga hore ah.
Tan waxaa daba socday bishii Luulyo ka dib markii lagala laabtay e-baaskiillada elektaroonigga ah ee San Francisco ka dib markii ay soo baxeen warbixinno ku saabsan dababka batteriga.
Sidaa darteed Lyft waxay sheegtay inay la shaqeyneyso bixiye batari cusub.
Waxaa la rajeynayaa in dib-u-daabacida ka socota magaalada New York ay wadada u xaareyso guulo dheeraad ah, illaa iyo dhibaatooyinka farsamada, Citi Bikes korontada ayaa cadeeyay baahi badan.
Waxaa jira war wanaagsan oo dheeraad ah oo loogu talagalay taageerayaasha wadaagista elektaroonigga ah - horaantii bishaan, Lyft iyo Wakaaladda Gaadiidka Dawladda Hoose ee San Francisco waxay oggolaadeen heshiis cusub oo afar sano ah.
Haddii aad rabto inaad ogaato asalka dhan ee ku saabsan kor u qaadista wadaagista elektaroonigga ah ka dibna eeg maqaalkeenna ku saabsan halbeega korantada ee la wadaago halkan.
Baaskiilka korantada ee loo yaqaan 'Vintage Electric Shelby Baaskiil' oo ay leedahay shirkadda fadhigeedu yahay Santa Clara waxay bixisaa naqshadeynta baabuurta casriga ah waana ta ugu dambeysa safkooda internetka ee loo yaqaan 'e-baaskiilka casriga'.
Shirkadda ayaa leh 'Baaskiilkan cusub oo ah 48-volt-ka Shelby-ka ee tuubada culus wuxuu ku muteysanayaa Carroll Shelby macdanta gaarka ah ee buluugga ah 289 Slabside' - Shelby waxaa lagu yaqiinay sumcadooda wadista degdegga ah ee baabuurta laga soo bilaabo 1960-yadii.
Baaskiilku wuxuu watayaa isla sawirka buluugga N6 ee sawirka midabka leh ee loo yaqaan 'Carroll's Cobra', oo leh khadyo madow oo isku dheelitiran iyo astaanta caanka ah ee Shelby oo ay weheliso Cobra badging.
Fiiri fiidiyowga kaasoo bixinaya faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan asalka shirkadda.
Shirkadda Awoodda Swiss waxay Soo Bandhigtay Laba Baasboor oo E-xamuul ah
Bike Europe waxay soo warinaysaa in Repower, oo ah soo saaraha Switzerland iyo qaybiyaha korontada cagaaran, ay dhowaan soo bandhigtay isugeynti ugu dambeysay ee bii'ada dhaq dhaqaaqa korantada ee loo yaqaan Homo Mobilis oo ah labo xamuul oo nooca loo yaqaan 'e-cargobikes'; Lambronigo iyo Lambrogino.
Labada noocba waa gaadiid lugta lagu caawiyo, oo lagu bartilmaameedsanayo saadka mile ee ugu dambeeya ee deegaan magaalo, laakiin sidoo kale waxay diirada saarayaan adeegsiga xarumaha warshadaha waaweyn.
Bike Europe waxay intaa ku dartay '' Repower 'sidoo kale waxay qaybisaa alaabo badan oo cajiib ah sida iftiinka bannaanka ee Paline; taksi biyo ah oo loo yaqaan 'Rebout on Lake Garda' iyo sidoo kale saldhigyo lagu dalaco hoteellada…. '
Schaeffler wuxuu dhammeystirayaa Tijaabada koowaad
Nooca 'Schaeffler Bio-Hybrid' waxaa loo yaqaan 'e-bike joogto ah' inkasta oo muuqaalkiisu yahay gaari yar ama gaari keenid.
Sida bushkuleeti e-baaskiil waxaa lagu fuuli karaa jidadka baaskiilka iyo sidoo kale wadada - gaagaaban waxaa loo oggol yahay meel kasta oo baaskiilka kale loo oggol yahay.
Electrive wuxuu noo sheegayaa in soosaarayaasha Jarmalka ee Schaeffler ay dhammaystireen tijaabooyinka dalabka ee ugu horreeyay ee loo yaqaan 'Bio-Hybrid pedelec'.
Gawaarida afarta lug leh ee curyaamiinta ayaa loo qorsheeyay inay galaan soosaarka taxanaha dhamaadka 2020.
Nooca-Hybrid-ka ah saqafka iyo muraayada-dabeysha waxaana laga heli karaa iyadoo la raacayo kursi labaad oo rakaab ah, jir sanduuq leh awoodeedu dhan tahay 1,500 litir ama nooc kale oo xamuul ah oo leh xamuul furan.
Electrive waxay noo sheegaysaa 'Sida uu sheegayo soo-saaraha, naqshada moodada nooca xamuulka nooca ah waxay sidoo kale awood u siisaa codsiyada khaaska ah, sida baararka qaxwaha ama gawaarida qaboojiyaha la qaboojiyey. Marka laga reebo codsiyada khaaska ah ee noocan ah, noolaha noolaha 'Hy-Hybrid ergo' wuxuu gaar ahaan si fiican u qiimeyn karaa gaadiidka rakaabka ah, warshadaha iyo maraakiibta wax lagu dhigto iyo adeegyada duullimaadka iyo duullimaadka
Continental - Maxay Maxay uga Baxeen Suuqa eBike?
Waxaan soo sheegnay bartamihii Noofembar sida Continental, soo saaraha taayirrada laakiin sidoo kale soo saare nidaamka 48V e-baaskiilka nidaamka wadista wadnaha, uu uga baxay suuqa elektaroonigga ah.
Baaskiilka Yurub ayaa dhawaan qaaday maqaalkan xiisaha leh kaas oo e-bike guru Hannes Neupert uu ku eedeeyay go'aanka 'silsiladda bixinta gawaarida uu saaran yahay cadaadis aad u xun sababtoo ah u wareegida gawaarida korantada. "Waxay horseed u tahay go'aano aan caqli gal ahayn oo lagu sameeyay cadaadis si loo sii noolaado." Wax shaqo ah kuma lahan suuqa e-bike / pedelec suuqa, kaas oo, ayuu yidhi, "Weli wuxuu ku jiraa marxaladda barbaarinta. Isbarbar dhiga suuqa taleefanka gacanta 1995 '.
Iswidish eBikepacking Adventure
Fiiri fiidiyowgan aadka u sarreeya ee safarka elektiroonigga ah ee cajiibka-muuqaalka leh ee hareeraha Isgoysyada Cairngorms ee ku yaal Riese & Muller Superdelite e-baaskiil. Waxay u muuqdaan inay Ike iyo Megan Fazzio oo ka socda San Diego Fly Rides ay heleen khibrad wanaagsan oo fasax ah!
Baaskiilada E-baasaska ma waxay yihiin Vans Delive-ka cusub - Yurubna Ma U horseedaa?
Maqaalka 'Forbes' ee maqaalkan ayaa sheegaya in, ka dib markii ay muuqatay buuq iyo jahawareer ka dhex jira suuqa baaskiil wadata ee Shiinaha, 'waxa ugu weyn ee soo socda' ee yaraanta korantada waxay noqon doontaa adeegsiga gawaarida korantada khafiifka ah, oo ay ku jiraan baaskiillada e-xamuulka, si loogu beddelo culus, wasakheyn. gasacadaha gaaska ku shaqeeya gaaska.
Dhab ahaantii tani waxay ku dhacdaa jawiga siyaasadeed ee cusub ee Yurub. 'Madaxweynaha la doortay Ursula von der Leyen wuxuu doonayaa in Europe ay noqoto qaaradda ugu horreysa ee dhexdhexaad ah cimilada dhexdhexaad ah' ayaa lagu yiri maqaalkan warsidaha ee Baaskiillada, oo uu qoray Lauha Fried, Madaxa Siyaasadda ee Baaskiillada Wershadaha Yurub, waaxda wershadaha baaskiilka ee Yurub.
Waxay siisaa warar badan oo wanaagsan oo ku saabsan baaskiiladaha iyo baaskiillada Yurub. Sidaad ka arki karto bogga boggooda wararka waxay raadinayaan inay kor u qaadaan 2 bilyan oo yuuro mashruucyada kaabayaasha wareegga ballaaran ee Yurub. Hoogay!
Siday Boqortooyada Midowday u heli karto dad badan oo wata baaskiillada iyo baaskiillada
Ampler waxay sameeyaan baaskiillo jilicsan oo jilicsan oo magaalada ah. Maqaalkan xiisaha leh ee Bike Biz ee Ampler's Ott Ilves wuxuu eegayaa waxa Boqortooyada Midowday ay sameyn karto si ay u bilowdo dhiirigelinta heerarka Dutch-ka ee caan ku ah baaskiil wadista.
'Badbaadada iyo fududeynta ayaa fure u ah soo qabashada' ayuu aaminsan yahay. Waxa uu ka gaabsaday wuxuu ahaa 'Wadooyin aamin ah, jidad baaskiil oo gooni gooni ah ayaa ah waxa ay dad badan ku helaan marka hore baaskiiladaha.'
Si kastaba ha noqotee wuxuu sidoo kale qorayaa arrimo kale oo aad muhiim u ah oo aan inta badan lagu xusin.
Marka hore Netherlands waxaa ka jira sharciyo qaanuun oo adag oo ka ilaaliya wadayaasha baaskiilleyda sharci ahaan darawalada, taasoo keenaysa darawalada inay taxaddar dheeraad ah muujiyaan.
Marka labaad, wadista gawaarida ayaa ah mid aan ku habooneyn magaalooyin badan oo Holland iyo Biljamka ah, Ilves wuxuu cadeeyay 'Isku day inaad ku wado agagaarka bartamaha magaalada Amsterdam ama Ghent. Waxaad dhawaan dareemi doontaa inaad jahwareersan tahay maqnaanshaha meelaha baabuurta la dhigto iyo qiimaha baarkinka oo sarreeya, iyo dareen guud oo ah inaad kaalinta labaad gasho noocyada kale ee gaadiidka, oo ay ku jiraan socodka, baaskiilka iyo gaadiidka dadweynaha. '
Shabakada Xaraashka ee Bartamaha Switzerland
Maqaalka luqadda Jarmalka ayaa sharraxaya shabakadda korantada elektaroonigga ah ee bulshada laga soo saaray Uri, gobol maamul Switzerland ah oo loo yaqaan 'Canton' kaasoo ku yaal wadnaha faneedyada caanka ah ee Swiss Alps.
Waxay noo sheegaysaa iyada oo kaashaneysa maaliyadeed labada Canton ee Uri iyo dowladda federaalka in shabakad lacag-ku-dirir loogu talagalay baaskiillada loo adeegsado laga dhex sameeyo guud ahaan Uri.
Hay'ada IG Bike Uri, waxay dejisay himiladeeda ah inay ku rakibto 32 xarumood oo ay ku xareysan karaan shabakadda baakadaha baaskiilka ee 550 km oo xaduudda ka wada gobolka.
Tani waa kaliya meesha ugu sareysa barafka saldhigyada wax laga dallaco. Saldhigyada caanka ee Bike Energy waxaay ka yimaadeen shirkadda Austrian Elektrizwerk Altdorf (EWA) AG.
Waqti xaadirkan waxaa jira in ka badan 10,000 oo tigidhada elektaroonigga ah ee 'baaskiilka tamar-baaskiilka' ee dhammaan waddamada Yurub oo 100 ka mid ahna ay ku jiraan Switzerland.
Gobolka deriska ah ee Ticino iyo gobolka dalxiiska ee Surselva waxay horey u leeyihiin saldhigyo lagu dalaco Bike Energy. Goobta rasmiga ah ee nidaamka Uri ayaa halkan ah.
Si aad uga faa'iideysato saldhigyada wax lagu dallaco waxaad u baahan tahay oo keliya fiilo koronto ku habboon oo la iibsan karo ama laga kiraysan karo deegaanka ayaa sheegaya maqaalku.
Xaraashka dacwadaha ayaa loo arkaa inay yihiin maalgashi soo saaraya soo celinta; In kasta oo rookarrooleyaashu ay ku dallacayaan xoogaa sentiyo koronto ah waxaa laga yaabaa inay kharash badan ku bixiyaan kafeega maxalliga ah….
Warbixintu waxay kor u qaadday walaacyada nabadgelyada ee loogu talagalay Riders-ka Baaskiilka ee Duugga ah
Warbixin ay soo saartay gudiga baarista shilalka wadooyinka ee deenishka (AIB) ayaa lagu falanqeeyay 20 dhacdo oo laxiriira baaskiiladaha elektaroonigga ah ee sababay dhaawac culus.
Waxay ogaatay in da'da 'ay wax ku biirisay' siddeed ka mid ah dhacdooyinka, iyo in raacitaanka baaskiilku uu u leeyahay 'culeys badan' dadka waayeelka ah iyo kuwa naafada ah ee la xiriira da'da ayaa sidaas leh, The Ebiketips-ka Boqortooyada Ingiriiska.
Sida muuqata ma jirin xiriir ka dhexeeyey awooda ama xawaaraha baaskiilka iyo shilalka - “Inta badan baaskiilleydu waxay ku safrayeen xawaare hoose inta ay ka gudbayaan taraafikada, ama xawaare u eg kan baaskiilka caadiga ah” sida lagu sheegay warbixinta.
Waxyaabaha kale ee gacan ka geysan kara waxaa ka mid ah la'aanta kaabayaasha amniga ee meelaha gaarka ah ee ay dhacdooyinku ka dhacaan, iyo dayactirka liita ee loo adeegsado baaskiilka.
In kasta oo e-baaskiilku wali yahay mid ahaan mid aad u amaan badan waxay mudan tahay in la raaco talooyinka amniga AIB ee ah in baaskiilku ka fogaado taraafikada, hubinta isu dheelitirka guud iyo awooda si badbaado leh u fuulista iyo xirista koofiyadda.
Baaskiillada duugga ah gaar ahaan waxaa lagula talinayaa inay bilaabaan isticmaalka heerarka kaalmada hoose kaliya oo ay boorsooyinkooda hooseeyaan baaskiilka.
Spin's Tougher E-skooters-ka
Wtop ayaa soo warisay in Spin ay u soo bandhigeyso mootooyin cusub oo adag oo koronto ah DC Qaar ka mid ah moodooyinka hore ayaa soconaya wax ka yar seddex bilood sida uu sheegayo maqaalku.
Juun 2019 wuxuu arkay mootada cusub ee lagu tijaabiyay barnaamij tijaabo ah oo ku yaal Baltimore 'oo leh natiijooyin rajo u leh kordhinta macaashka guud iyo yareynta kharashyada tuugada iyo kharribaad.'
Sida muuqata 'mootoyadu waxay leeyihiin, taayirro 10-inji ah, boorarka amniga oo yareeya kharribaad iyo cimri dherer batari ah ilaa 37.5 mayl oo buuxa.